Return Policy - IT and Mobile Online Sales in Myanmar | kmdmart.com
Delivery Date is the date when customer signed on the slip of kmdmart.com delivery date.
ဝယ်ယူသူမှ kmdmart.com မှပစ္စည်းလက်ခံရရှိသည်ဟု လက်မှတ်ထိုးသည့်နေ့ကို Delivery Date ဟုသတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Apart from Public Holidays, items with following conditions are qualified to return within3working days and kmdmart.com will re-deliver with the same model else non-returnable without any conditions.
kmdmart.com will not accept returns on any items after3working days
kmdmart.com မှ မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို ဝယ်ယူပြီး ၃ ရက်နောက်ပိုင်းမှ ပေးပို့ခြင်းကိုလက်ခံပေးမည်မဟုတ်ပါ။
Items are not qualified to return are as follows:
ဝယ်ယူသူလက်ခံရရှိပြီးဝယ်ယူသူ့ထံမှပစ္စည်းများသည် အောက်ပါအခြေအနေများဖြစ်ပြီးပါက ပြန်လည်ပို့ဆောင်မှုမပြုလုပ်သင့်ပါ။
Unboxed items/unpackaged items
(ပစ္စည်း၏အထုပ်အပိုး ပျက်စီးပြီး ဖွင့်လှစ်အသုံးပြုထားခြင်း)။